Ibanga lethu - Etagtron, Inc.
I-Etagtron ingumhlinzeki wezixazululo ezintsha ozibophezele ekusizeni abathengisi baphumelele.
Ihlinzeka ngobubanzi bokubona obunwetshiwe ku-RF futhi imvamisa ayingeni kalula ekuphazanyisweni kwangaphandle kwe-elekthronikhi.I-AM ivame ukubonwa ezitolo ezinkulu nezincane zezingubo, izitolo ezinkulu zakwa-DIY, izitolo ze-elekthronikhi, kanye nabathengisi bemithi lapho imikhiqizo inezinto ezisansimbi ukupakisha kwabo.
I-RF ilungele ngokuphelele abathengisi abanevolumu ephezulu yemikhiqizo ehlanganisiwe ngenxa yokunamathela kokunamathelayo, amathegi ayisicaba.Lokho kwenza i-RF uhlelo lokuzikhethela ezitolo ezinkulu, ezitolo zezaphulelo, ezamakhemikhali nezitolo zamavidiyo.Lokho kusho ukuthi, ikhono lokuthuthukisa amanye amaRF Izinhlelo ze-EAS kuRFID zisho ukuthi ukusetshenziswa kwayo kusanda kukhula ezitolo zezingubo.
Ubuchwepheshe be-RFID buyazenzela ukuqoqwa kwedatha futhi bunciphisa kakhulu imizamo yabantu namaphutha.
I-RFID isekela ukufundwa kwamathegi amaningi e-RFID ngaphandle kokuhlolwa kwe-line-of-sight noma into-by-nto edingekayo, enikeza ukwanda kokusebenza kahle.
Onke amathegi e-RFID ngaphakathi kobubanzi angatholakala ngokushesha futhi afaniswe nolwazi oluku-database yakho.
Amafa angabhekiswa ngokuqhathaniswa nezindawo azabelwe futhi aqoshwe njengamanje, alahlekile, noma ahanjiswe kwenye indawo.
I-RFID ingahlanganiswa nokuskena okusebenzayo kanye nabafundi abalungisiwe besisombululo sokulandela ngokuphelele.
Izinhlobonhlobo zabathengisi - kufaka phakathi izitolo eziningi eziphezulu zomhlaba wonke, izitolo ezinkulu nezitolo zezidakamizwa - sezivele zisebenzisa i-ESL, izinzuzo ezingaba khona yi-Dynamic Centralized Pricing, In-Store Heat-Mapping, Automated Inventory Management.
Bheka phambili ...